ဘာသာရေး၊ အနုပညာနှင့်စီးပွားရေး၊ Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဘယ်လို Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံခဲ့ကြသည်
မေယာန်ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကဘာတွေလဲ။ သငျသညျမက္ကစီကိုတောင်ပိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တူသောနေရာများမြင်ကြလျှင် Chichen Itzaထဲမှာ ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်သို့မဟုတ် Comalcalcoအကယ်စင်စစ်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဤမေးခွန်းကိုမေးကြပြီ။ သောကြောင့် ရှေးခေတ် Mesoamerican ယဉ်ကျေးမှု ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားနှိုးဆွ။
နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်သမိုင်းတစ်လျှောက်မာယာယဉ်ကျေးမှုသည်ရောက်ရှိခဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်မြင့်။ သူသည်theရာမပိရမစ်များနှင့်အချိန်ကုန်လွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အခြားတည်ဆောက်မှုများကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေးသောနိုင်ငံရေးစနစ်များကိုမြို့ပြပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင်ဖွဲ့စည်းရန်၊ ကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေများရှိစီးပွားဖြစ်ကွန်ယက်များတည်ထောင်ရန်နှင့်အရေးကြီးသောဥာဏ်ရည်အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန်၊ အမေရိကအလယ်ပိုင်းတွင်အဆင့်မြင့်ရေးသားမှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မေယာန်တို့၏ဓလေ့ထုံးစံများအကြောင်းကိုရှာဖွေလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
1 ဘယ်လိုအမြင့်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဘုန်း၏ကာလအတွက် Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံခဲ့ကြသည်
1.2.1 cenotes ၏ကိုးကွယ်မှု
1.2.2 Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံများအကြောင်းပြောနေသည့်အခါဘောလုံးကစားပွဲသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်
1.2.3 Hanal Pixan, သေလွန်သောသူ၏နေ့
1.5 မာယာမြို့ကြီးများနှင့်ဗိသုကာ၊ မာယာဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလူသိများသည်
1.7 ဘာသာစကားနှင့်အရေးအသား၊ မေယာန်တို့၏ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
ဘယ်လိုအမြင့်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဘုန်း၏ကာလအတွက် Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံခဲ့ကြသည်
Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်ပိုမိုနီးစပ်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည် စပိန်၏ဆိုက်ရောက်၏အချိန်။ ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ဒီဟာကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမြင့်မားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဒီဓလေ့ထုံးစံများလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိသူတို့ကိုတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်ရှုသွားကြသည်။
သူတို့၏ဗဟိုအမေရိကန်အိမ်နီးချင်းများနည်းတူမာယာလူမျိုးများလည်းဖြစ်ကြသည် နိုင်ငံရေးသမားများ။ သူတို့ရဲ့နတ်ဘုရားများအနက်ဖြစ်ခဲ့သည် Itzamnaစကြဝosာနှင့်အထူးသဖြင့်နေကိုပါ ၀ င်သောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်။ ဒါပေမယ့်လည်းလေးခု ချောင်း သို့မဟုတ်မုန်တိုင်းများ၏ဘုရား; က ပဝါ ကမ္ဘာမြေနှင့် the ကျင်းပခဲ့တယ် ဘေကာ ထိုနည်းတူ၊
ထို့အပြင်onရိယာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုရရှိသောအမွေးအတောင်များကိုးကွယ်ခြင်းသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ Kukulcan), နှင့် Quetzalcoatlအသက်၏ဘုရား။ မေယာလူမျိုးများသည်ကမ္ဘာ၏ဒဏ္thာရီဇာစ်မြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏မြင့်မြတ်သောစာအုပ်ပင်ရှိကြသည်။ ဒါဟာသူပဲ Popol Vuh, ကိုလည်းခေါ်တော်မူ အကြံပေးစာအုပ် သင်၏ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟုသုတများစွာကိုသိမ်းဆည်းရန်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Mayans သူတို့ရဲ့နတ်ဘုရားများ၏တစ် ဦး အတန်ငယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအယူအဆရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သည်အခွန်ပေးကြ၏ လူသားယဇ်ပူဇော်ခြင်း အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မေးသနည်းဟူမူကား၊ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာအသက်ပိုရှည်ရန်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ မေယာလူမျိုးများသည်သူတို့၏နတ်ဘုရားများအတွက်အသက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သက်တမ်းကိုရှည်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သူတို့ဟာလူသားတွေရဲ့စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကအစမှသယ်ဆောင်ခဲ့သည် ကောင်းသောစပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်ပါစေသော နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားကိစ္စများ iverseာ၏လည်ပတ်မှု ရာသီနှင့်ရာသီဥတုလိုပဲ။
နောက်ဆုံး၌သူတို့၏အိုလံပစ်အားနတ်ဘုရားများအတွက်သာရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်းမေယာလူမျိုးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောင်းကင်တွင်ရှိသည်။ The Xibalba ထိုနေရာသည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏အမူအကျင့်ပေါ် မူတည်၍ ထိုတွင်သူတို့သည်နူးညံ့စွာသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံခံရသည်။
ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုမှာမာယာလူမျိုးများ၏အခမ်းအနားများဖြစ်သည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူတို့၏ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အရာအားလုံးသည်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီအခမ်းအနားတချို့ကိုခင်ဗျားကိုပြမယ်။
ဤရွေ့ကား torcas သို့မဟုတ်နစ်မြုပ် karst မြေပြင်ဒေသများဒါခေါ် Riviera Maya ၏ခရီးသွားမြို့ကြီးများရှိပါတယ်ရှိရာယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်အတွက်အလွန်မကြာခဏဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသသို့သင်သွားလျှင်၎င်းတို့အားသင်မည်သို့သွားမည်နည်း၊ Mayans အတွက် cenotes သည်သင်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိမ့်မည် မြင့်မြတ်သောနေရာများ။ သူတို့ကိုမရဏာနိုင်ငံသို့ဝင်သည့်တံခါးပေါက်ဟုသတ်မှတ်ကြသောကြောင့်အခမ်းအနားများ၊
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ဒီမြို့အဘို့ရှိခဲ့ပါတယ် Pok to Pok သို့မဟုတ်ဘောလုံးကစားနည်း၊ သူတို့၏ဓလေ့ထုံးစံများ၏အကျော်ကြားဆုံးအခမ်းအနားများဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပင်ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်နယ်မြေများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mayans များအတွက်ကြီးမားသောအရေးပါမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ပါတီများမှတစ်ဆင့်မြို့ကြီးများအကြားအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်၊
Monte Alban ရှိဘောလုံးကစားကွင်း
သို့သော်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားသူများကိုသာမန်အားဖြင့် euthanized ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်လည်းသူကတစ် ဦး ထင်ရှားတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ် ရိုးရာဓလေ့အစိတ်အပိုင်း။ သင်ဤဂိမ်းတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သည်ကိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားပါကမြေကြီးကိုထိစရာမလိုဘဲပန်းရန်ပိုက်ကွန်ကိုကျော်။ ဘောလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သူ့ကိုပခုံး၊ တံတောင်ဆစ်ဒါမှမဟုတ်တင်ပါးနဲ့သာရိုက်တယ်။
Hanal Pixan, သေလွန်သောသူ၏နေ့
ယနေ့ကဲ့သို့ပင်မေယာလူမျိုးများသည်သူတို့၏သေလွန်သောသူတို့၏နေ့လည်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပွဲတော်ဖြစ်ခဲ့သည် ဟာနယ် ပီဇန် ဂီတ၊ အစားအစာနှင့်အခြားအခမ်းအနားများရှိချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုအောက်မေ့ခဲ့သည်။
စပါးရိတ်ရာကာလအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခြင်းသည်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လောက၏ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မေယာလူမျိုး၏မျိုးပွားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်အခမ်းအနားအမျိုးမျိုးရှိသည်။
ယင်းနှင့်အတူ ပပုလူး မိုrain်းရေကိုရွာစေခြင်းငှါ၎င်း၊ Sac Ha ပါ သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြောင်းဖူးအဘို့အမေးတယ်။ ကမ္ဘာမြေ၏အသီးအနှံများကိုစုဆောင်းပြီးသည့်နောက်၎င်းအကနှင့်အတူကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် နန်းဖာ။ ဤနောက်ဆုံးအခမ်းအနားအတွက်သူတို့သည်ပြောင်းဖူးများထံမှအရုပ်များကိုဖန်တီးကာယဇ်ပလ္လင်များပေါ်တွင် တင်၍ သောက်နေစဉ်ဆုတောင်းကြသည်။ နေပြည်တော်ပြောင်းဖူးသူ့ဟာသူနှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နောက်ဆုံးတွင် xukulen ၎င်းသည်ဖန်တီးရှင်ဘုရား Itzamna ထံချဉ်းကပ်ခြင်းအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည် Hetzmek ကလေးငယ်များအတွက်နှစ်ခြင်းခံပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Mayans သူတို့ရဲ့အစိုးရအဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ် ဘုရင်စနစ်ဥပမာစပိန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ် ထိုကာလ၌။ သို့သော်အချို့တူညီမှုများရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ဘုရင်များကိုဘုရားသားများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ တန်ခိုးတော်သည်ဘုရားသခင်ထံမှလာ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်၎င်းတို့၏မြို့တော် - ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပိုင်နက်၏အစိုးရကိုအသုံးချပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်.
လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အထက်တန်းလွှာကိုဘုရင်ကိုယ်တိုင်အပြင်အခြားဘုရင်များကဖွဲ့စည်းခဲ့သည် shamanic ဇာတ်ကောင်ယဇ်ပုရောဟိတ်။ ဘာသာတရားသည်မာယာကမ္ဘာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ရှမ်းလူမျိုးများသည်ကြီးမားသောအာဏာရှိသည်။ သူတို့သည်evenကရာဇ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများထဲမှသုံးပုံတစ်ပုံမှာထိုသူများဖြစ်ကြသည် မှူးမတ်အဘယ်သူ၏ဘွဲ့များမျိုးရိုးလိုက်နှင့်သူကိုလည်းရှငျဘုရငျကိုအကြံပေးခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အောက်ပိုင်းလူတန်းစားရှိရာ လုပ်သားများနှင့်အစေခံကျွန် နိမ့်ဆုံး link ကို, လာမယ့် ကျေးကျွန်။ အဆုံးတွင်အခွင့်အရေးအားလုံးကင်းမဲ့ပြီး၎င်းတို့အားဝယ်ယူခဲ့သောမင်းသား၏ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌မာယာယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ လူလတ်တန်းစား၀ န်ထမ်းများ၊ ကုန်သည်များ၊ လက်မှုပညာရှင်များနှင့်လူလတ်တန်းစားစစ်တပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
တိတိကျကျဆိုရလျှင်စစ်ပွဲသည်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကလူများ၏စိတ်ဓာတ်၌အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့သည်အနီးအနားရှိနယ်မြေများနှင့်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးမာယာစစ်တပ်သည်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ကြီးမားသောစည်းကမ်း။ ရှိပါသည် ကြေးစားသို့သော်ကျန်းမာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသားများအားလုံးသည်စစ်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ထိုပconflictsိပက္ခများတွင်အမျိုးသမီးများသည်အခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ပုံရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဤမာယာစစ်သည်များသည်လက်နက်များအသုံးပြုခဲ့ကြသည် လေးနှင့်မြား။ ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်သူတို့ကအသုံးပြုခဲ့သည် atlatlစပိန်ခေတ်တုန်းကဓားရှည်တစ်ချောင်း၊ မြတ်နိုး။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သူတို့၏အလောင်းများကိုစီတန်း သံချပ် ဆားငန်သောဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကဤမြို့၏မြို့ကြီးများကိုမြို့ပြဆန်ဆန်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့် မမှန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးတွင်အခမ်းအနားနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဗဟိုဌာနတစ်ခုရှိပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူနေအိမ်ရာပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရသည်။
အလွန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောမှာမာယာဗိသုကာဖြစ်သည်ဤယဉ်ကျေးမှုသည်ရှေးခေတ်ကာလကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအနက်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအထူးလုပ်သားတွေတောင်ရှိတယ်။
သူတို့ကရင်ပြင်များ၊ အဆောင်များ၊ မုန်းတီးမှု သို့မဟုတ်ကားလမ်း။ သို့သော်နန်းတော်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ဤအဆောက်လုပ်ရေးအတော်များများအပြင်၌ရှိကြ၏ ပန်းချီကားများ၊ ပန်းပုများ၊.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၎င်း၏အအောင်မြင်ဆုံးအဆောက်အ ဦး များထဲမှဖြစ်ပါတယ် triassic ပိရမစ်။ ၎င်းတွင်၎င်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သေးငယ်သောအဆောက်အအုံနှစ်ခုရှိပြီးနံရံတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အတွင်းဘက်သို့မျက်နှာမူထားသည့်အဓိကအဆောက်အ ဦး တစ်ခုပါဝင်သည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာများလုပ်လာခဲ့ပြီးဒီပုံစံဟာဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ဒဏ္.ာရီ ကြောင်းမြို့၏။
မာယာအနုပညာတွင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိသည် အခမ်းအနားအခြားအကြောင်းအရာများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်သို့မဟုတ်သစ်သားပန်းပုများ၊ ပန်းချီကားများ၊ အဖိုးတန်ကျောက်များနှင့်ကြွေထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ကအရောင်များအတွက်အထူး predilection ရှိခဲ့ပါတယ် အစိမ်းနှင့်အပြာ သူတို့အဘို့ထိုအတန်ချိန်တွေအများကြီးကျောက်စိမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ရဲ့မြို့ကြီးများအတွက် ကျောက်၌ stelae။ သို့သော်အားလုံးအထက်, မျက်နှာစာနှင့်အတူအလှဆင် တောက်ပသောအရောင်များကိုခြယ်သ stucco။ တကယ်တော့သူတို့ကအဓိကရှိခဲ့ပါတယ် နံရံဆေးရေးပန်းချီကား။ သူတို့၏ကြွေထည်မြေထည်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သည်အဆင့်မြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနည်းစနစ်များကိုသိရှိကြသည် အိုးထိန်းသမားဘီးလည်းမရှိ။ ဤအကြောင်းကြောင့်မျက်မှန်ကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်အပိုင်းအစများကိုအခြားအလေ့အကျင့်များဖြစ်သောထုတ်လုပ်သောအတိုင်ဖေါက်ခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဘာသာစကားနှင့်အရေးအသား၊ မေယာန်တို့၏ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
ဒီယဉ်ကျေးမှု၏နယ်မြေတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘုံဘာသာစကားမှလာသည် ပရိုတိုမာယာ ဂွာတီမာလာကုန်းမြင့်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ အလားတူစွာဂန္ထဝင်အချိန်ကာလ (ဘီစီ ၃ ရာစုတစ်ဝိုက်) ၏ထိန်းသိမ်းထားသောကျမ်းစာသားအားလုံးကိုဒါခေါ်တွင်ရေးသားခဲ့ပုံရသည်။ cholti သို့မဟုတ်ဂန္ Maya ဘာသာစကား။
အတိအကျဤမြို့၏အရေးအသားစနစ်ကသူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်၎င်းသည်မြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် ခေတ်မီ ထို့အပြင်၎င်းတို့အားကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့သည့်ကျောက်စာများနှင့်စာသားများကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
သုတေသီများကိုငြင်းဆိုကြသော်လည်းအချို့ကမူဤအရေးအသားကိုအဆင့်မြင့်ဖွံ့ဖြိုးသည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ ပထမနမူနာဘီစီ ၃ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခင်ကကဲ့သို့သော Mesoamerican အရေးအသားစနစ်များပြီးသားရှိခဲ့သည် Zapotec.
ဒါဟာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် glyphic အရေးအသားဆိုလိုသည်မှာရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ရုပ်ပုံများကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာသွားကြည့်ပါ၊ logograms နှင့်အတူပေါင်းစပ်တဲ့စကားလုံးများ၏ကိုယ်စားပြု သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလက္ခဏာ။ ယခု၎င်းသည်လုံးလုံးလျားလျားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားသည်။
ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကမာယာစာအုပ် ၄ အုပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ The Madrid Codex နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်အခြေခံသည် ။ ။ သို့မဟုတ်ဤ Mesoamerican လူတို့အဘို့ရက်ပေါင်းမြင့်မြတ်သောသံသရာ။ The Dresden Codex ၎င်းတွင်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာဇယားများအပြင်နှစ်သစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအခမ်းအနားများ၏ဖော်ပြချက်များပါရှိသည်။ သူ၏အနေဖြင့် ပဲရစ် Codex ဒါဟာမာယာယဇ်ပုရောဟိတ်များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၊ Codex Grolierအဘယ်သူ၏စစ်မှန်မှုကိုမကြာသေးမီတိုင်အောင်ငြင်းခုံခဲ့သည်မှာမကြာသေးမီကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနတ်ဘုရားများပုံများပါ ၀ င်သည်။
နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်မာယာပြက္ခဒိန်၏ရက်စွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်များစွာသောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကြောင့်၎င်းအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာဒီကိုလံဘီယာမတိုင်မီမြို့ကြောင်းမှန်သည် ဂရုတစိုက်ကောငျးကငျအလောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်.
သို့သော်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစကြာ ၀ ofာ၏အသိပညာမဟုတ်ဘဲ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ရည်ရွယ်ချက်နတ်သမီး။ နေနှင့်လ၏နေကြတ်ခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှဟုမှတ်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိလိုသည်။
ပြက္ခဒိန်အတွက်, Mayans အောင်မြင်ခဲ့သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတစ်နှစ်တွက်ချက် သူ့အချိန်၏ဥရောပသားများထက်ပင်ပိုကောင်း။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုရက်ပေါင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ် ဆွေမျိုးသားချင်းရမှတ်များ ဝိုင်နိုင် နှင့်ရက်ပေါင်း 360 သို့မဟုတ် tun။ သို့သော်အညီအမျှ၎င်းတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောအချိန်ကာလသုံးခုကိုအခြေခံသည် ။ ။ရက်ပေါင်း ၂၆၀၊ က ဟားဟား 365 ၏နှင့်ခေါ်ဆိုမှု ပြက္ခဒိန်ဘီး52 နှစ်ကနေ။
နောက်ဆုံးမှာမာယာစီးပွားရေးအကြောင်းကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်။ သူတို့၏စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သိပုံရသည် အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များ။ သူတို့ကအတွက်ကျင့်သုံး ကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အခြားထမြောက်တော်မူမျက်နှာပြင် သူတို့ကတဆင့်ရေလောင်းသော လိုင်းများ။ သူတို့ရရှိသောစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များတွင်ပြောင်း၊ ပီလောပီနံ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ squash၊ နေကြာသို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့် cacaoအထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအတန်းများက၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မာယာဖြစ်ဟန်ရှိသည် ကုန်သည်ကြီးများ။ မြို့ကြီးများကျင်းပခဲ့သည် စျေးကွက် သူတို့သည်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးစင်တာများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုတိရစ္ဆာန်များက၎င်း၏လမ်းများတစ်လျှောက်သို့မဟုတ်လှေဖြင့်မြစ်များမှတဆင့်သယ်ယူပြီးရောက်ရှိခဲ့သည် တစ်ခုလုံးကို Mesoamerican ဒေသ။ လူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းများမှာအထည်အလိပ်၊ လက်ဝတ်ရတနာနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများသာမကအစားအစာထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဘယ်လို Mayans ၏အကောက်ခွန်ခဲ့ကြသည်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကအမေရိကန်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်အတိုးတက်ဆုံးသောလူမျိုးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကနက္ခတ္တဗေဒနှင့်ဗိသုကာအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဘယ်လို Mayans ၏ဓလေ့ထုံးစံခဲ့ကြသည်